Ciidamada Itoobiya Oo Markale Lagu Weeraray Gobalka Galgaduud. – Calamada.com
Ciidamada Itoobiya Oo Markale Lagu Weeraray Gobalka Galgaduud.
calamada March 28, 2017 1 min read
Wararka ka imaanaya gobolka Galguduud ayaa sheegaya in weeraro dhabo gal ah loogu dhigay ciidamo Itoobiyaan ah oo galbinaya gaadiid kuwa xamuulka qaada oo faaruq ah kuwaasi oo labo maalin ka hor kasoo dhaqaaqay degmada Dhuusa-mareeb.
Weerarka dhabogalka ah ayaa kadhacay meel kudhow deegaanka Oodweyne oo udhexeeya magaalooyinka Dhuuso mareeb iyo Ceelbuur.
Ciidamada Itoobiya oo xalay ku hoyday halka loo yaqaan (Waanta Maalin Nugur) ayaa saaka markii uu Waagu Baryay waxay u dhaqaaqeen dhanka Ceelbuur waxayna la kulmeen hujuum culus oo uga yimid dhanka Shabaabul Mujaahidiin.
Jugta qaraxyo iyo rasaas lays dhaafsanayay ayaa maanta barqadii laga maqlay dhulka baadiyaha ah ee deegaanka Oodweyne, dad xoola dhaqata ah waxay sheegeen in ciidanka Itoobiya ay muddo saacada ah ku hakadeen goobta lagu weeraray waxaana loo malaynayaa in khasaara dhimasho iyo dhaawac ah ay la kulmeen.
Boqolaal katirsan ciidamada Itoobiya oo gelbinaya 90 gaari faaruq ah ayaa laba maalin ka hor kasoo dhaqaaqay degmada Dhuusamareeb waxayna kusii jeedaan degmada Ceelbuur balse waxay la kulmayaan weeraro dhabagal joogta ah.
Saraakiil katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa warbaahinta u sheegay in weeraradii dhacay shalay iyo maanta Â khasaara xooggan lagu gaarsiiyay ciidamada gumeysiga Itoobiya.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 29-06-1438 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Faafreebka Wararka 01-07-1438Hijri.